Daawo: Xildhibaanadii GALMUDUG oo Ka hadlay Doorashada Madaxwaynaha “Sidii Somalia ayuu isbedel dhacayaa”! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo: Xildhibaanadii GALMUDUG oo Ka hadlay Doorashada Madaxwaynaha “Sidii Somalia ayuu isbedel dhacayaa”!
Daawo: Xildhibaanadii GALMUDUG oo Ka hadlay Doorashada Madaxwaynaha “Sidii Somalia ayuu isbedel dhacayaa”!
Feb 19, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug ee Dhowaan Xilka ka qaaday Madaxwayne C.kariim Guuleed ayaa sheegay inay mar kale dib u dhigeen Doorashadii Madaxwaynaha maamulka Galmudug.
Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka oo maanta kasoo degay magaalada Cadaado ayaa wuxuu sheegay inay Doonayaan inuu Galmudug ka dhacdo Isbedel Balaadhan oo lamid ah midkii ka dhacay Guud ahaan Dalka Soomaaliya, Iyagoona ka Turjumi doona Rabitaanka Shacabka Sida uu hadalka u dhigay.
Dhowr Jeer ayaa Xildhibaanadaan kasoo Horjeeda madaxwayne Guuleed loo diiday inay ka baxaan ama Soo galaan magaalada Cadaado, Sidoo kalana waxaa Xusid Mudan in Ciidamo ay ku Weerareen Halkii ay ku shirayeen.
Previous PostDaawo Sawirro: Milateriga Ciraaq oo bilaabay duulaan galbeedka Mowsil looga saarayo Mintidiin Daacish! Next PostAskari soo qaatay qorigiisii wuxuuna galay darbi asagoo isku diyaariyey dagaal ka dhan Amison DHACDO UGUB AH!